Home Wararka Farmaajo oo ina adeerkiis Balal u dirsaday dalka Ruushka! Maxaa soo kordhay
Farmaajo oo ina adeerkiis Balal u dirsaday dalka Ruushka! Maxaa soo kordhay
Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo oo ku taagan lugtii ugu danbeeysay ee xukunkiisa ayaa hadana qaaday talaabo kale oo qar iska tuur ah. Waxa uu uu diray dalka Ruushka ninka ay ilama adeerka yihiin ahana Wasiir ku xigeenka Wasaarada Arimaha Dibadda, Balal Maxamed Cismaan.
Farmaajo ayaa markii uu ka quustay dalalka reer Galbeedka, gaarka ahaan dalka Mareykanka ayaa waxa uu rajo ka gashay in uu heshiis la galo dalka Ruushka. Farmaajo oo raadinayo qaab ama dariiq kastaa oo uu ugu sii nagaan karo xukunka dalka ayaa doonayo in uu siiyo Ruushak Saldhig Military.
Waalida Farmaajo ayaa keentay in uu saacadihii u danbeeyay xukunkiisa uu damco in uu xaraasho kheyraadka iyo Karaamada Umaadda Soomaaliyeed. Waxaan shaki ku jirin in dowlada Ruushka ayan ku mashquuli doonin nin u muuqda in uu sii dhimanayo, isbada daa in ay heshiis la galaan.